Iyo CIA yakatenga Crypto AG, mutengesi we cryptographic zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
ICIA yakatenga Crypto AG, mutengesi wezvigadzirwa zvemakomputa
ICIA nemaGerman intelligence services vakapinda mungozi mukurumbira wenhoroondo yeSwitzerland kusarerekera nekushandisa kambani yeSwitzerland seplatifomu yehunyanzvi hwepasi rose hwehunyanzvi kwemakumi emakore, maererano neshumo rakaburitswa nenhengo dzeparamende yeSwitzerland.
Vatsvakurudzi akagumisa kuti vakuru veSwitzerland vaiziva nezvekuita kwakaoma espionage umo iyo CIA yaive yakavanda uye yaidzora kambani yeSwitzerland, Crypto AG, iyo yaitengesa muchivande michina yekunyepera kuhurumende dzekunze.
Chirevo chinoratidza kupera kwekuongorora kweSwitzerland yakatanga mushure mekunge nyaya yeOperation Crypto yaburitswa kutanga kwegore rino neWashington Post yakabatana neZDF, terevhizheni yeruzhinji yeGerman uye nhepfenyuro yeSwitzerland SRF.
Kuvhiya Crypto akashandisa "mufananidzo weSwitzerland kunze kwenyika senyika isina kwayakarerekera", Sekureva kweshumo, iyo yakaratidzawo kuti zviremera zveSwitzerland zvechokwadi zvakabvumidza CIA nemumwe wayo wechiGerman, BND, kuita "mashandiro ehungwaru kukuvadza dzimwe nyika, vachihwanda kuseri kwekambani yeSwitzerland."
Basa revasori rakabudirira zvekuti gwaro reCIA rakarongerwa rakanzi "ungwaru kupidigura zana."
Kubva muZug, Switzerland, Crypto aive mumwe wevanotungamira pasi vanopa ekuvharira maturusi anoshandiswa nehurumende dzekunze kuchengetedza kutaurirana kwevasori vavo, masoja nevamiriri.
Asi kambani iyi yaive yepachivande yeCIA neBND muma1970, uye yaive yakabatana muchivande neNational Security Agency, yekumisikidza kweAmerica kubvira 1950.
Nekushandisa zvakashata zvakavanzika mune zvakagadziriswa zvishandiso, Tsori dzeAmerica neGerman vanowana ruzivo vamiriri (chinyorwa chakavanzika chakashandurwa nenzira yakavharidzirwa pakati pehumiriri hwehumiriri, senge embasi kana mumiriri, uye Ministry of Foreign Affairs) yenyika yainomirira) nekumwe kutaurirana, zvese kubva ku "mhandu" uye kubva kune vamwe vanobatana. Kuvhiya kwacho kwaizivikanwa mukati nemazita emakodhi akaita sa "Thesaurus" uye "Rubicon."
Nhoroondo yakajeka yeCIA yakawanikwa neThe Post yakatsanangura chirongwa ichi se:
Kukunda kwevasori vezana ramakumi maviri, zvichishamisa kuti "hurumende dzekunze dzaibhadhara mari zhinji kuUnited States uye nerombo rakanaka rekutaurirana zvakavanzika zvakaverengwa nenyika mbiri dzekune dzimwe nyika (uye pamwe kusvika mashanu kana matanhatu). "
Iyi tambo inongedzera kuchinjana kwehungwaru hunowanikwa kubva kumidziyo yakatengeswa nevatsigiri (kusanganisira neUK) naCrypto.
Nhoroondo yeCIA inoratidza kuti vakuru veSwitzerland vaiziva nezve chiitiko ichi, asi havana kubatanidzwa zvakananga mukuita basa iri. Chirevo cheSwitzerland chinosimbisa zvimwe zvezvinhu zvakavanzika izvi, asi zvinopfuura nekutsanangura zvinofungidzirwa kuti muSwitzerland kusangana. Ichitsanangura zvinyorwa zveSwitzerland zvehungwaru, chirevo ichi chinotaura kuti veSwitzerland intelligence service vaiziva muna 1993 kuti Crypto "ndeyevashandi vekunze kwenyika uye yaitengesa michina 'inotambura'."
Chirevo ichi chinoramba chichiratidza kuti Swiss spy agency, iyo Strategic Intelligence Service (SIS), yakapinda muchibvumirano chepamutemo neCIA iyo yakapa mukana wekutaurirana kubva kune dzimwe nyika.
Kambani yepasi rose ye crypto yakatengwa namuzvinabhizinesi weSweden Andreas Linde, uyo akataura mukutsinhana neemail nenhau dzeUS kutanga kwegore rino kuti aisaziva nezve muridzi weCIA paakatenga midziyo iyi.
Kudzora kwekutengesa kunze kwakatemwa nevakuru veSwitzerland zvichitevera kuburitswa neruzhinji nezveCrypto kutanga kwegore rino kwakatyisidzira kupona kwekambani.
Federal Council ikozvino yasara kusvika Chikumi 1, 2021 kuti isarudze uye itore kurudziro iri mumushumo.
Philippe Bauer, kanzura wenyika uye nhengo yekomisheni yeparamende yekuongorora, akataura nezvenyaya iyi kuRTS. Maererano naye:
Hurumende yakanga isingazive nezvenyaya iyi kusvika nguva pfupi yadarika apo masevhisi ayo aive akaronga zvese uye ikabvunzwa kana izvi zvakajairika kuhurumende.
“Kwete, uye izvi zvakare zvimwe zvekushoropodza kwakaitwa nenhumwa dzedare rinotungamira. Akataura kuti hazvigamuchirwe, kana basa rehungwaru rikashanda pamwe nefaira nevekune dzimwe nyika ruzivo, kuti harukumbire mvumo yekuzviita kubva kumasimba ayo ekutarisira, kureva kuti, kubva kuFederal Council sezvakapihwa ne mutemo uripo "
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » ICIA yakatenga Crypto AG, mutengesi wezvigadzirwa zvemakomputa
Wow ... zvinoshamisa sei ... hahaha, iwe uchiri kufunga kuti kunyorera hakuonekwe?
kana network yeTOR, yakachengeteka .. ndiani anoti haisi ivo .. uye facebook, uye wasap .. zvakadaro ... nehupfu ini ndakamisa kambani, social network, uye semapenzi .. isu tese tinosaina ... ale ...
Steam inopemberera makore masere kubvira kuburitswa kweBeta kweLinux